တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ရင်ငွေ့ခြုံလွှမ်း အနမ်းတရှိုက် …
Posted by မေဓာဝီ at 4:47 PM
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်၊ မေဓာပြောတာကို တို့အပြည့်အ၀ထောက်ခံတယ်၊
11/20/2012 5:14 PM
နမ်းပုံနမ်းနည်း နိဿရည်းကို သေချာကျနစွာ လာရောက်ဖတ်ရှုသွားပါတယ် ကြီးမေရေ။ မှတ်သားထားရမယ် ကံကောင်းထောက်မစွာ ဥရောပရောက်ခဲ့ရင်တော့ လာနမ်းရင်တော့ ဒကာဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ဒကာမဆိုရင်တော့ no no ဆိုပြီးတော့လေ။ ပြီးမှ ပြန်ရှင်းပြလိုက်မှာပေါ့။ ချမ်းမြေ့ပါစေ
ကိုယ်တွေများ ဒီအနမ်းလေးတွေကို သဘောကျ ဂုဏ်ယူလိုက်ရတာ..
သဘောထား မကြီးနိုင်တဲ့ သူတစ်ချို့က လွဲရင်ပေါ့။
ဒေါ်ရင်လတ်ကြီးတောင် ဒီလို အနမ်းမျိုး မရဘူး ဆိုပြီး ပြောမိသေးတာ။
ရင်ထဲက အဖြူရောင် မေတ္တာနဲ့ ကြည့်တဲ့အခါ ဖြူစင်တဲ့ သူတို့တွေရဲ့ မေတ္တာကိုမြင်နိုင်ပေမဲ့ မည်းမှောင် ညစ်ထေးနေတဲ့ သူတစ်ချို့ရဲ့ စိတ်တွေကတော့ အမည်းရောင်ဘဲမြင်လေရဲ့...
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်ကို ကြည်နူးဝမ်းသာရတဲ့ နေ့ကလေးပါ။
အနမ်းတိုင်းဟာ ရမ္မက်ဆန္ဒတွေ ယှက်ငြိနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖတ်သွားတယ် မမေရေ
ဂန္တဝင်အနမ်း... သမိုင်းဝင် အနမ်း...၊ မှန်လိုက်တာ မမေရယ်...၊ အဲဒီ ဓါတ်ပုံလေး သတင်းတွေမှာ တက်လာတော့ အံ့သြဝမ်းသာစိတ်နဲ့ အကြာကြီး ကြည့်နေမိတယ်၊ အကြိမ်ကြိမ် စော်ကားခံရတဲ့၊ အသက်ကိုတောင် လုပ်ကြံခံရတဲ့၊ အချိန်များစွာကို တစ်ယောက်တည်း ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးကြီး တစ်ယောက်ကို လူ့တန်ဖိုး သိတဲ့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ကြီး တစ်ယောက်က တလေးတစားနဲ့ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့ အနမ်း...၊
တဏှာပေမ မပါဘဲ ဖြူစင်၊ သိမ်မွေ့တဲ့ ရိုးရိုးသားသား အနမ်းပွင့်လေးတွေဟာ လူလူချင်း ဆက်ဆံရေးမှာ တခါတလေ စကားလုံးတွေ အများကြီးထက်ကို ပိုပြီး တာသွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိတယ် မမေ...။
အဲဒီအနမ်းလေးက စကားလုံးတွေ အများကြီးထက် တာသွားတယ်..အဲဒီဓာတ်ပုံလေး မြင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းလှပါဘိ...
11/21/2012 12:58 AM
ဟုတ်တယ် ကျနော်လည်း ခံစားဖူးတယ် တစ်ခါတုန်းက ယောက်ျားတန်မဲ့ မျက်ရည်ကျမိအောင် ၀မ်းနည်းဖူးတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကျနော့်ကိုဖက်ပြီး အားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်တဲ့ ကျနော့်ကျောကိုသပ်လို့ပေါ့ ခဏလေးပါပဲ ဒါပေမယ့် အရှိန်ဟုန်တော့ပြင်းတယ် ကျေးဇူးလည်းတင်မိတယ်ဗျ။ဒီမှာကတော့ အဲ့ဓလေ့နည်းတယ်မှတ်လားး စိမ်းတုန်းပဲ ။
သတင်းစာတွေမှာတော့ အိုဘားမားရဲ့ အနမ်းက ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတယ်း) ကျေးဇူးလည်းတင်တယ် ငါတို့အမေ ငါတို့ပြည်သူတွေကို သူ တကယ်ကို တန်ဖုိူးထားတာပဲလို့ ခံစားမိလိုက်တယ် ။
ဒါနဲ့ ကျနော့်ဆီ အစ်မ မလာတာကြာပြီ လာနေကျ ဧည့်သည် အိမ်မှာမမြင်ရတာကြာတော့ ၀မ်းတွေတောင်နည်းလို့ * ကျနော့်ကို ခဏလောက် ဖက်ထားပေးပါလားဗျာ *း))))
အမ..ဒေါ်စုကို နမ်းသွားတဲ့ အနမ်းကို မြင်ရတာတော့ ကြိုက်တယ်..
ညီမကတော့ ညီမကို အဲလိုလာနမ်းရင်တော့ မကြိုက်ဘူး။ လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး အမ. သူ့ယဉ်ကျေးမှုကို မလိုက်နာတာ မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းတာပါ။
မိန်းကလေး အချင်းချင်းတော့ လက်ခံပါတယ်။
11/21/2012 6:38 AM
ပြောဖို့ကျန်လို့... ကျနော့်ဘာသာ ခံစားမိတဲ့အကြောင်းနော်..တော်ကြာ ဒေါ်စုကို ပြောတယ် ဖြစ်နေဦးမယ်..
အိုဘားမား နမ်းသွားတဲ့ ပုံတွေကို တော့ ကြိုက်တယ်။
11/21/2012 6:40 AM
များလည်း သဘောကျ ကြရဲ့...၊အစ်မပြောသလိုပါပဲ....ဂန္ထ
မေတ္တာတရားဟာ ဘယ်အရာနဲ့မှ နှိုင်းယဉ်လို့ မရဘူးလို့ပဲ ကျွန်တော်ခံယူမိပါတယ်ဗျာ။ ရိုးရှင်းတဲ့ မေတ္တာတရားလို့ပဲ ခံစားနိုင်ကြပါစေဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားအားလုံးလည်း ထာဝရမေတ္တာတွေနဲ့ အမြဲအတူ လက်တွဲနိုင်ကြပါစေလို့ပဲ ကျွန်တော် ဆုတောင်းမိပါတယ်ဗျာ
နားနားကပ်ပြီး အမေစုကို ရယ်စရာ တစ်ခုခု ပြောနေတယ်မှတ်တယ်။ အမေစုတစ်ယောက် ဟက်ဟက်ပက်ပက် ပြုံးလို့။း)
အမေစုပြုံးတာ အမိပြည်ပြုံးတာနဲ့ အတူတူပါဘဲ။
I would like to haveavery different view aboutasmooch President Obama planted onacheek of Daw Aung San Su Kyi during his trip to Myanmar. The trip was highly publicized in the U.S. and around the world, because he was the first sitting president to visit Myanmar in all these years. Even though the kiss can be defined asawarmly and friendly kiss, it is still inappropriate in my opinion. Journalists travelling along with President Obama called the moment as one of the most awkward moments during the trip. An American Journalist Matt Spetalnick even described it as “…… another awkward moment at the end when he embraced and kissed the devout Buddhist, leaving her visibly uncomfortable.” Both Daw Aung San Su Kyi and the journalist did their part; the journalist showed his understanding of Myanmar culture and Daw Aung San Su Kyi showed respect of her own culture by displaying discomfort when being kissed even though she once lived in England and hadaBritish husband. The proverb “If you are in Rome, do as the Romans do” does exist forareason: to abide by the customs of the society when one isavisitor. President Obama should have done his homework by studying about Myanmar Culture before he went there.
Cultural assimilation is very dangerous if one does not know how to absorb it. The U.S. and Myanmar have now agreed to start Military practice in Myanmar. Meaning is that more and more American service men and women will be going into the country. When they go there, they will bring their own culture; hugging, kissing, living together, one night stand, extra marital affair, separation, and divorce_ that will escalate many social problems in Myanmar. It is time for us to decide what cultural standards and tradition we hold as Myanmar, what American cultural aspect we should take, and what their cultural practice we should reject. I understand that acceptance and tolerance isagood way to emerge two cultures, but it should come withaboundary. Imitation of hugging, kissing, living together, one night stand, extra marital affair, separation, and divorce does not and will not make us Americans or Europeans. When we imitate their work ethic (hard working), respects to human rights, and practice of democracy, our country will become the nation we all hope to see in one of these days.
I prefer to use "Anonymous," becasue name does not matter. Content of the comment does matter.
11/24/2012 12:17 AM
Some kind of cultural shock, but very delicate.
Obama is outspoken person,he might have fulfilled with kind sympathy and dedication to long struggling woman.
His physical manner shown for warm soothing, encouraging and shouldering to her.
Don't judge by appearance, explore the beneath of it and whether ethical or not.
အဆိုးအကောင်း မဝေဖန်လိုပေမဲ့ အနမ်းပုံတွေ မြင်လိုက်တော့ စိတ်ထဲအီလည်လည်ကြီး ဖြစ်သွားတာအမှန်ပဲ။ Cultural Exchange ကို လက်ခံနိုင်လောက်အောင် အမြင်မပွင့်လင်းသေးဘူး လို့ပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်သုံးသပ် လိုက်ပါတယ်။
I didn't realized where you were lading. good job!! "The kiss" isalittle brother is so proud of the big sister kind of kiss! It was many words behind the kiss. Like, I hear you, you had been through so much and I feel for you with the whole heart.
အနမ်းကို သိသတဲ့ ...ေိခိ